ဌာနေဘာသာစကားပြောသူများ၏အရေအတွက်စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
သို့ရာတွင်ထိုသို့သောအဆင့်များအားလုံးကိုသတိဖြင့်အသုံးပြုသင့်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထို စကားသည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဘာသာစကားများနှင့်ဘာသာစကားများကိုခွဲခြားရန်အတွက်ဘာသာစကားဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။  ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကို အပြန်အလှန်နားလည်နိုင်သည့် မျိုးကွဲများအ စုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် ဒိန်းမတ် နှင့် နော်ဝေ တို့၏ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့လွတ်လပ်သောအမျိုးသားအဆင့်စံဘာသာစကားများကို၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်အပြန်အလှန်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်းသီးခြားဘာသာစကားများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။  အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဂျာမန် ၊ အီတလီ နှင့် အင်္ဂလိပ် အပါအ ၀ င်အများလက်ခံလေ့ရှိသောဘာသာစကားများစွာသည်အပြန်အလှန်နားလည်မှုမရှိသောမျိုးကွဲများပါ ၀ င်သည်။ အာရဗီ ဘာသာစကားကိုတခါတရံ ခေတ်သစ်အခြေခံအာရဗီ ကို ဗဟိုပြုသောဘာသာစကားတစ်ခုတည်းဟုသတ်မှတ်ကြသော်လည်းအခြားစာရေးသူများက၎င်း၏အပြန်အလှန်နားလည်မှုမရှိသောမျိုးကွဲများကိုသီးခြားဘာသာစကားများအဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။  အလားတူပင် တရုတ် သည်တစ်ခါတစ်ရံဘာသာစကားတစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်။  တရုတ်၊ မန် ဒူ ၊ ဝူ နှင့် ယု တို့ကဲ့သို့သောတရုတ်စကားမျိုးစုံအုပ်စုများကိုဘာသာစကားများအဖြစ်လည်းဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီတွင်အပြန်အလှန်နားမလည်နိုင်သောမျိုးကွဲများစွာရှိသည်။ 
လူ ဦး ရေအပြောင်းအလဲနှင့် ဘာသာစကား ပြောင်းလဲမှုတို့ကြောင့်အချိန်နှင့်အမျှကွဲပြားသောယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောဆိုသူများကိုရရှိရန်လည်းအခက်အခဲများရှိသည်။ အချို့ဒေသများ၌ယုံကြည်စိတ်ချရသော သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များမရှိပါ၊ ဒေတာသည်လက်ရှိမဟုတ်ပါ၊ သန်းခေါင်စာရင်းသည်ဘာသာစကားပြောသောဘာသာစကားများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (သို့) မရေရာစွာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဟောပြောသူများသည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများသို့မဟုတ်လူနည်းစုဘာသာစကားပြောဆိုသူများသည်အမျိုးသားဘာသာစကား၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုလျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ 
လူမျိုးစု (၂၀၁၉, ၂၂ကြိမ်မြောက် တည်းဖြတ်ခြင်း)[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ပါဘာသာစကားများ၏ ၂၀၁၉တည်းဖြတ်မှုအတွက် အနည်းဆုံးပြောဆိုသူ၁၀သန်းမှစ၍ မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုခြင်းရှိသည့် ဘာသာစကားများအဖြစ်စာရင်းသွင်းကြသည်လူမျိုးစုများ၏ ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီကိုရည်ညွှန်းသည့် အက်စ်အိုင်အန်လ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေခံသည်အရာ, ယူနိုက်တက်စတိတ် ။ 
အနည်းဆုံးပြောဆိုသူ၁၀သန်းမှစတင်၍ မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောဆိုသူများ၏ အရေအတွက်
၁ တရုတ်ဘာသာစကား ၉၁၈ ၁၁.၉၂၂ တရုတ်-တိဘက်
၂ စပိန် ၄၉၀ ၅.၉၉၄ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
၃ အင်္ဂလိပ် ၃၇၉ ၄.၉၂၂ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
၄ ဟိန္ဒီ (သက္ကတ ဟိန္ဒူစတာနီ ၃၄၁ ၄.၄၂၉ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
၅ ဘင်္ဂါလီ ၂၂၈ ၂.၉၆၁ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
၆ ပေါ်တူဂီ ၂၂၁ ၂.၈၇၀ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
၇ ရုရှား ၁၅၄ ၂.၀၀၀ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
၈ ဂျပန် ၁၂၈ ၁.၆၆၂ ဂျပန်နွယ်
၉ အနောက်ပန်ချာပီ ၉၂.၇ ၁.၂၀၄ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
၁၀ မာရသီ ၈၃.၁ ၁.၀၇၉ အင်ဒို-ယူရိုပီယန်
11 Telugu ၈၂.၀ ၁.၀၆၅ ဒြာဝီဒီယန်နွယ်
12 Wu Chinese ၈၁.၄ ၁.၀၅၇ Sino-Tibetan
13 Turkish ၇၉.၄ ၁.၀၃၁ တူရကီနွယ်
14 Korean ၇၇.၃ ၁.၀၀၄ ကိုရီးယားနွယ်
15 French ၇၇.၂ ၁.၀၀၃ Indo-European
16 German ၇၆.၁ ၀.၉၈၈ Indo-European
17 Vietnamese ၇၆.၀ ၀.၉၈၇ Austroasiatic
18 Tamil ၇၅.၀ ၀.၉၇၄ ဒြာဝီဒီယန်
19 ယွေ့တရုတ် ၇၃.၁ ၀.၉၄၉ Sino-Tibetan
20 အူဒူး (Persianised Hindustani) ၆၈.၆ ၀.၈၉၁ Indo-European
21 ဂျာဗား ၆၈.၃ ၀.၈၈၇ Austronesian
22 အီတလီစကား ၆၄.၈ ၀.၈၄၂ Indo-European
23 အီဂျစ်ပြည်သုံးအာရဘီစကား ၆၄.၆ ၀.၈၃၄ Afroasiatic
24 ဂူဂျာရတီ ၅၆.၄ ၀.၇၃၂ Indo-European
25 အီရန်နွယ် ပါရှားစကား ၅၂.၈ ၀.၆၈၆ Indo-European
26 ဘောဂျပူရီ ၅၂.၂ ၀.၆၇၈ Indo-European
27 မင်နန်တရုတ် ၅၀.၁ ၀.၆၅၁ Sino-Tibetan
28 ဟခ္ခါတရုတ် ၄၈.၂ ၀.၆၂၆ Sino-Tibetan
29 ကျင်တရုတ် ၄၆.၉ ၀.၆၀၉ Sino-Tibetan
30 Hausa ၄၃.၉ ၀.၅၇၀ Afroasiatic
31 ကာနန္ဒစကား ၄၃.၆ ၀.၅၆၆ ဒြာဝီဒီယန်
32 အင်ဒိုနီးရှား (အင်ဒိုပြည် ပသျှူးစကား) ၄၃.၄ ၀.၅၆၄ Austronesian
33 ပိုလန် ၃၉.၇ ၀.၅၁၆ Indo-European
34 ယိုရူဘာ ၃၇.၈ ၀.၄၉၈ Niger–Congo
35 ရှန် တရုတ် ၃၇.၃ ၀.၄၈၄ Sino-Tibetan
36 မာလာယလံ ၃၇.၁ ၀.၄၈၂ ဒြာဝီဒီယန်
37 မြန်မာစကား ၃၅.၅ ၀.၄၅၈ Sino-Tibetan
38 Odia ၃၄.၅ ၀.၄၄၈ Indo-European
39 Maithili ၃၃.၉ ၀.၄၄၀ Indo-European
အောက်ပါဇယားသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဆွီဒင်စွယ်စုံကျမ်း Nationalencyklopedin တွင် ထုတ်ဝေသောမိခင်ဘာသာစကားအရေအတွက်တွင် ပြောဆိုသူအရေအတွက်အများဆုံး ထိပ်တန်း ဘာသာစကား ၁၀၀ ပါရှိသည်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှသန်းခေါင်စာရင်းနည်းလမ်းများသည်အတော်အတန်ကွဲပြားခြားနားပြီးအချို့နိုင်ငံများသည်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ဘာသာစကားများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် မိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုသူများသို့မဟုတ် စုစုပေါင်းပြောဆိုသူများ၏ ဘာသာစကားစာရင်းသည် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။ ၂၀၁၀ မှခန့်မှန်းထားသောနောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်များကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။ 
ထိပ်တန်းဘာသာစကား (၁၁) ခုသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထုတ် Nationalencyklopedin မှထပ်ဆောင်းကိန်းဂဏန်းများရှိသည်။ ၉၅ သန်းအထက်ကိန်းဂဏန်းများသည်အနီးဆုံး ၅ သန်းသို့ဝိုင်းထားသည်။
• ဒ၊သ။ : ဒီတစ်ခုတည်းသာလျှင်ဖြစ်သည်။
• ပ၊ဝ။ : ပါဝင်သည်။
အမျိုးသားအန်ဆိုင်ကလိုပဒင်၏ လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းအရ ထိပ်တန်းဘာသာစကားများ
၁ မန်ဒရင်း (တ၊သ။) ၉၃၅ (၉၅၅) ၁၄.၁%
၂ စပိန် ၃၉၀ (၄၀၅) ၅.၈၅%
၃ အင်္ဂလိပ် ၃၆၅ (၃၆၀) ၅.၅၂%
၄ ဟိန္ဒီ[မှတ်စု ၁] ၂၉၅ (၃၁၀) ၄.၄၆%
၅ အာရဘီ ၂၈၀ (၂၉၅) ၄.၂၃%
၆ ပေါ်တူဂီ ၂၀၅ (၂၁၅) ၃.၀၈%
၇ ဘင်္ဂါလီ ၂၀၀ (၂၀၅) ၃.၀၅%
၈ ရုရှား ၁၅၀ (၁၅၅) ၂.၄၂%
၉ ဂျပန် ၁၂၅ (၁၂၆) ၁.၉၂%
၁၀ ပန်ချာပီ ၉၅ (၁၀၀) ၁.၄၄%
၁၁ ဂျာမန် ၉၂ (၉၅) ၁.၃၉%
၁၂ ဂျာဗား ၈၂ ၁.၂၅%
၁၃ ဝူ (ရှန်ဟိုင်းစကားပြောသူ ပ၊ဝ။) ၈၀ ၁.၂0%
၁၄ မလေး (မလေးနှင့်အင်ဒိုနီးရှား ပ၊ဝ။) ၇၇ ၁.၁၆%
၁၅ တယ်လူဂူ ၇၆ ၁.၁၅%
၁၆ ဗီယက်နမ် ၇၆ ၁.၁၄%
၁၇ ကိုရီးယား ၇၆ ၁.၁၄%
၁၈ ပြင်သစ် ၇၅ ၁.၁၂%
၁၉ မာရသီ ၇၃ ၁.၁0%
၂၀ တမီးလ် ၇၀ ၁.၀၆%
၂၁ အူဒူး ၆၆ ၀.၉၉%
၂၂ တူရကီ ၆၃ ၀.၉၅%
၂၃ အီတလီ ၅၉ ၀.၉0%
၂၄ ယွေ့ (က ၅၉ ၀.၈၉%
၂၅ ထိုင်း ၅၆ ၀.၈၅%
၂၆ ဂုဂျာရတီ ၄၉ ၀.၇၄%
၂၇ ကျင် ၄၈ ၀.၇၂%
( ဟခ္ခါနှင့် ထီအိုချူ ပ၊ဝ။
၂၉ ပါရှား ၄၅ ၀.၆၈%
၃၀ ပိုလန် ၄၀ ၀.၆၁%
၃၁ ပါရှတို ၃၉ ၀.၅၈%
၃၂ ကာနန္ဒ ၃၈ ၀.၅၈%
၃၃ ရှန် ၃၈ ၀.၅၈%
၃၄ မာလာယလံ ၃၈ ၀.၅၇%
၃၅ ဆူဒန် ၃၈ ၀.၅၇%
၃၆ မြန်မာ ၃၅ ၀.၅၄%
၃၇ ဟောင်သာ ၃၄ ၀.၅၂%
၃၈ ဩဒိယ (ဩရိယ) ၃၄ ၀.၅0%
၃၉ ဟခ္ခါ ၃၁ ၀.၄၆%
၄၀ ယူကရိန်း ၃၀ ၀.၄၆%
၄၁ ဘောဂျပူရီ [မှတ်စု ၂]၂၉ ၀.၄၃%
၄၂ တဂလော့ဂ် (ဖိလစ်ပိုင်လ်) ၂၈ ၀.၄၂%
၄၃ ယောရူဘာ ၂၈ ၀.၄၂%
၄၄ မေထိလိ ၂၇ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content ၀.၄၁%
၄၅ ဥဇဘက် ၂၆ ၀.၃၉%
၄၆ သိန္ဓိ ၂၆ ၀.၃၉%
၄၇ အံဟရစ် ၂၄ ၀.၃၇%
၄၈ ဖူလာ ၂၄ ၀.၃၇%
၄၉ ရိုမေးနီးယား ၂၄ ၀.၃၇%
၅၀ ဩရောမော ၂၄ ၀.၃၆%
၅၁ ဣဂဘို ၂၄ ၀.၃၆%
၅၂ အဇာဘိုင်ဂျနီ ၂၃ ၀.၃၄%
၅၃ အဝဓီ ၂၂ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content ၀.၃၃%
၅၄ ဂန် ၂၂ ၀.၃၃%
၅၅ စေဘွာနို (ဝိသယန် ) ၂၁ ၀.၃၂%
၅၆ ဒတ်ခ် ၂၁ ၀.၃၂%
၅၇ ကာဒိသျှ ၂၁ ၀.၃၁%
၅၈ ဆာရဘို-ခရိုအေးရှ ၁၉ ၀.၂၈%
၅၉ မာလာဂာဆယ် ၁၈ ၀.၂၈%
၆၀ ဆာရိုင်ကီ ၁၇[မှတ်စု ၃] ၀.၂၆%
၆၁ နေပါလီ ၁၇ ၀.၂၅%
၆၂ ဆက်ဟာလာ ၁၆ ၀.၂၅%
၆၃ စစ်တကောင်းသား ၁၆ ၀.၂၄%
၆၄ ကျွင် ၁၆ ၀.၂၄%
၆၅ ခမာ ၁၆ ၀.၂၄%
၆၆ တူရမန် ၁၆ ၀.၂၄%
၆၇ အာသံ ၁၅ ၀.၂၃%
၆၈ မဒူရာ ၁၅ ၀.၂၃%
၆၉ ဆိုမာလီ ၁၅ ၀.၂၂%
၇၀ မာဝရီ ၁၄ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content ၀.၂၁%
၇၁ မဂဟီ ၁၄ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content ၀.၂၁%
၇၂ ဟာရန်ဝီ ၁၄ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content ၀.၂၁%
၇၃ ဟန်ဂေရီယန် ၁၃ ၀.၁၉%
၇၄ ချတ္တီစခါဟီ ၁၂ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content ၀.၁၉%
၇၅ ဂရိ ၁၂ ၀.၁၈%
၇၆ ချီဝ ၁၂ ၀.၁၇%
၇၇ ဒက်ကန် ၁၁ ၀.၁၇%
၇၈ အကန် ၁၁ ၀.၁၇%
၇၉ ကာဇက် ၁၁ ၀.၁၇%
၈၀ မြောက်ပိုင်း မင် ၁၀.၉
၈၁ ဆယ်လေတီ ၁၀.၇ ၀.၁၆%
၈၂ ဇူလူး ၁၀.၄ ၀.၁၆%
၈၃ ချက်ခ် ၁၀.၀ ၀.၁၅%
၈၄ ကိနျာဝန္ဒ ၉.၈ ၀.၁၅%
၈၅ ဓုန္ဓာရီ ၉.၆ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; refs with no name must have content ၀.၁၅%
၈၆ ဟိုင်တျန် ခရီအိုးလ် ၉.၆ ၀.၁၅%
၈၇ အရှေ့ပိုင်းမင် (Fuzhou dialect ပ၊ဝ။) ၉.၅ ၀.၁၄%
၈၈ ဣလောကန်နို 9.1 ၀.၁၄%
၈၉ ကွီချွာ 8.9 ၀.၁၃%
၉၀ ကီရုန်ဒီ ၈.၈ ၀.၁၃%
၉၁ ဆွီဒိသျှ ၈.၇ ၀.၁၃%
၉၂ မုံ ၈.၄ ၀.၁၃%
၉၃ ရှိုနာ ၈.၃ ၀.၁၃%
၉၄ ဟွီဂါ ၈.၂ ၀.၁၂%
၉၅ ဟီလီဂယ်နွန်/ဣလုင်ဂို (ဝိသယန်) ၈.၂ ၀.၁၂%
၉၆ မောသီ ၇.၆ ၀.၁၁%
၉၇ ရှိုသာ ၇.၆ ၀.၁၁%
၉၈ ဘယ်လာရုစီယန် [မှတ်စု ၄]၇.၆ ၀.၁၁%
၉၉ ဘာလိုချီ ၇.၆ ၀.၁၁%
၁၀၀ ကောကာနီ ၇.၄ ၀.၁၁%
အနည်းဆုံးမိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုသူသန်း ၅၀ နှင့်သန်းပေါင်းများစွာ ( Ethnologue )
↑ Evaluating language statistics: the Ethnologue and beyond 3–5။ UNESCO Institute of Statistics (31 March 2006)။
↑ Dialectology။ Cambridge University Press။
↑ The Semitic Languages။ Routledge။ pp. 263–311။
↑ Chinese။ Cambridge University Press။
↑ The Sino-Tibetan languages။ Routledge။ pp. 72–83။
↑ The Cambridge Encyclopedia of Language။ Cambridge University Press။ 1988။ pp. 286–287။ ISBN 978-0-521-26438-9။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Summary by language size (in en)။ For items below #26, see individual Ethnologue entry for each language.
↑ World Population Clock: 7.7 Billion People (2019) - Worldometers (in en)။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Abstract of speakers' strength of languages and mother tongues – 2000, Census of India, 2001
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဌာနေဘာသာစကားပြောသူများ၏အရေအတွက်စာရင်း&oldid=709838" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။